Uncategorized – Yangon Heritage Trust
20th Blue Plaque Yangon Regional High Court
The 20th blue plaque was installed to commemorate the High Court of Yangon Region as the landmark building on November 24 with the cooperation of Yangon City Development Committee, Yangon Heritage Trust and Royal Phillips Cooperation. The High Court building […]
19th Blue Plaque Yangon General Hospital
The prominent Yangon General Hospital in the heart of downtown Yangon today receivedacommemorative Yangon City Heritage Blue Plaque. This Blue Plaque marked 19th plaque of the Yangon Heritage Trust. The city’s first General Hospital, located across the street […]
ဂန္တဝင်ခေတ်ဆန်း ဗိသုကာလက်ရာဖြင့် ခမ်းနားဝင့်ကြွားစွာ တည်ရှိနေသော ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (ယခင် ပြည်ထောင်စုဘဏ်) အဆောက်အအုံတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြားကို ၂၀၁၇ မေ ၁၆ ရက်တွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ တပ်ဆင်သော အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြားသည် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၈ ခုမြောက် ကမ္ဗည်းပြားလည်း ဖြစ်သည်။ ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသော ယင်းအဆောက်အအုံကို မူလက အိန္ဒိယရီဇတ်ဖ်ဘဏ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၃၉ မတ်လတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရီဇတ်ဖ်ဘဏ် မတည်ဆောက်မီက အဆိုပါမြေနေရာတွင် ရီကော်ဒါတရားရုံး တည်ရှိခဲ့သည်။ […]
18th Blue Plaque Yangon Stock Exchange
The splendid neoclassical style Yangon Stock Exchange (YSX) received the commemorative Yangon City Heritage Blue Plaque on 16 May 2017. The Blue Plaque at YSX marked Yangon Heritage Trust’s 18th plaque. Located on the corner of Sule Pagoda Road and […]
သမိုင်းဝင်ကာ နာမည်ကျော်ကြားသော ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ် (၆) အခြေခံပညာ အထက် တန်းကျောင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၇ ခုမြောက် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြားကို မတ် ၂၊ ၂၀၁၇ တွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယခင်က စိန်ပေါလ်အထက်တန်းကျောင်းဟု လူသိများခဲ့သော အဆိုပါကျောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကျောင်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အနော်ရထာ လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသည်။ ဂုဏ်ရှိန်ထည်ဝါသော စိန်ပေါလ်ကျောင်းသည် ၁၉ရာစုခန့်က ကျော်ကြားခဲ့သော သာသနာပြုကျောင်းများအား ကိုယ်စားပြုသည့် အထင်ကရ ဥပမာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စိန်ပေါလ်အထက်တန်းကျောင်းသည် […]